Ma wheelchair ese emagetsi inotengwa zvakasiyana uye iyo mutengo Kuwedzera kweiyo yepamusoro mhando mavhiripu iyo ine hunyanzvi hwakawanda uye hwepamusoro husingagadzirisike zvinhu. Iyo mota haina kuitirwa kuti igare nekusingaperi uye kuparara kunogona kuitika chero nguva kana ikasachengetedzwa. Ivhareji mutengo uri $ 125 yebasa plus zvinhu. Kugadziridza kunogona zvakare yakaderera mutengo asi simudza zvakanyanya zvichienderana nerudzi rwekukuvara. Mamwe makambani anoshandira mota dzemahara kumutengi nekuti inishuwarenzi inoifukidza. Zvisinei, haisi nguva dzose yakavharwa. Iyo mutengo inogona kuunganidzwa nekufamba kwenguva uye inogona kuve mutoro kune vamwe. Izvo zvakanyanya zvakakosha kudzivirira izvi mhando yekukuvara kuburikidza neapo neapo maintenance uye kudzivirira kukanganisa kwakanyanya kune iyo wiricheya.
Kune zvimwe zvikamu zvinogona kukuvara kana zvisina kutarisirwa uye mutengo yekugadzirisa inogona kusvika kune yakawanda seye itsva motokari mari yekugadzirisa uye kunyange kuzvipfuura. Yekutonga kwemufaro mutengo webasa inofungidzirwa $ 150 pamwe nekutengwa kwezvikamu zvakaputsika. Rimwe basa ndere zvinodhura asi hazvidiwe kazhinji kana iyo wiricheya iri kuchengetwa nguva dzose. Mamwe masevhisi madiki anotangira pamadhora 60- $ 75 senge armrest kana kuongorora uye kuchenesa.
Waranti chinhu chakanakisa kuva nacho chekugadzirisa kunoitwa kune wiricheya kuve nechokwadi kana zvikamu zvitsva tadza yakavharwa pasina mari yekuwedzera ku wiricheya mushandisi. Izvi zvivimbiso zvinogona kuwedzera iyo mutengo zvekugadzirisa, zvakadaro, zvinopa chengetedzo kuti zvikamu zvichagara kwenguva yakareba zvakakwana kuti zvikoshe iyo mutengo yebasa uye chikamu. Zvimwe zvikamu zvinogona kugara kwenguva yakareba asi pane izvo zvisingagare kwenguva yakareba nekuda kwekuremara ndicho chikonzero chikuru chekuzorora kuti hapana mari yekuwedzera inoshandiswa kugadzirisa nyaya.
Zvimwe zvinhu zvinofanirwa kugara zvichiongororwa ndiwo mavhiri uye zvikamu zvakaita sechigaro chemaoko, zvigaro, uye zororo remakumbo. Mavhiri anogona kudhura kugadzirisa zvichienderana nekunyaradza kwekufamba. Mavhiri ane akakwirira mutengo wakasiyana nokuti mhando vhiri rakasarudzwa rinogona kuve pakati pematatu akasimba, akasununguka akasununguka, uye mweya. Wiri vhiri rinoshanda rakasiyana chinangwa uye riri mutengo zvakasiyana zvinokanganisa iyo unhu ye wiricheya zvachose. Zvigaro zvinotangira pamadhora 60- $ 500 nekuti iyo zvinhu inogona kuve yakachipa uye isinganzwisisike kwekushandisa kwenguva refu uye mamwe anogona kunge akasimba, akasununguka, uye akakwirira kwazvo unhu. Kana a wiricheya inotarisirwa mukati menguva yese iyo mutengo ichave shoma nekuti kugadzirisa kushoma kunenge kuchidikanwa.
Kuita Walt Disney Nyika Iwanikwe